JINGHPAW KASA: SHARAW HKA MAW KAPAW AI HTE SENG NNA SANGLANG
SHARAW HKA MAW KAPAW AI HTE SENG NNA SANGLANG
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuay Sinna Ginwang Dap Ba (2) n pu, Daung (6) Ginra hta lai wa sai shata (29) ya shani Hpakant, Sharaw Hka Maw hta byin lai wa sai Bawm Yam Dum kapaw ai hte seng nna Mung shawa masha ni hpe sang lang dan ai lamang hpe September (1) ya shani Dap Dung (6) kaw galaw lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Mung shawa niakata hta n dai kapaw ai hte seng nna ningmu n bung hkat ai hte tak sawn ai lam ni law wa ai majaw ya na zawn sang lang ai lamang galaw ai re lam Dung (2) na Du Kaba kawn tsun shana wa ai. N dai bawm yam dum kabaw ai lam madung gaw myen hpyen hpung ni gap dat ai laknak kaba gaw company niasau dum kaw shawng wa hkrat ai kawn wan hkru wa nna bawm yam dum de hkru wa nna kapawayai wa ai re lam, myen hpyen asuya ni La Mawng Kawng hpe zing madu la mayu aiamarangelaknak ni majoi gap sharu bun ai majaw ya na zawn bawm yam dum kapaw nna shanhteahpyen hpung yawng bawm yam dum hte kapaw lawm mat wa ai re lam, KIA ni kawn ninghkap majan sha re majaw laknak kaba ni n lang ai lam, myen hpyen ni shanhtealaknak hte shanhte si ai re lam ni hpe tsun sang lang dan lai mat wa sai lam shiga na chye lu ai. Sanglang hpawng ngut ai hpang bawm yam dum kapaw ai hta lawm mat ai myen hpyen ni kawn lu zing la ai laknak jahten ni hpe mung shawa masha ni hpe madun dan lai wa sai lam mung na chye lu ai.
စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် KIA တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ တပ်ရင် (၆) တွင် သြဂုတ်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရှရော်ခမော် ပေါက်ကွဲမှုအကြောင်း ပြည်သူလူထုအား ရှင်းလင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ပေါက်ကွဲမှုမှာ ကောလဟာလ အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေသဖြင့် လူထုအားရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒုတပ်ရင်မှူးကပြောပြပါသည်။ ပေါက်ကွဲမှု အမှန်ဖြစ်စဉ်မှာ ဗမာစစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော လက်နက်ကြီး၊ ဆီသိုလှောင်ရုံကိုထိမှန်ခဲ့ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းရာမှ ယမ်းဂိုဒေါင်ပေါက်ကွဲခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗမာစစ်တပ်၏ လမောင်ကုန်း သိမ်းယူရေးအတွက် မဆင်မခြင် အတင်းထိုးစစ်ဆင်ခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း ဗမာတပ်ရင်း တစ်ရင်လုံး ပေါက်ကွဲမှုအထဲပါသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ KIA အနေဖြင့် ခံစစ်ဖြင့်သာခုခံခြင်းဖြစ်သဖြင့်၊ လက်နက်ကြီးများမသုံးကြောင်းနှင့် ဗမာစစ်တပ်အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏လက်နက်ဖြင့် ၄င်းတို့ထိခိုက်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း သူက ကချင်ပြည်သူ များကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ထိုရှင်းလင်းပွဲတွင် ပေါက်ကွဲမှုမပြီး သိမ်းယူရရှိခဲ့သော ပျက်စီးနေသော လက်နက်များအား ပြည်သူလူထုများအား ဗဟုသုတရရန်အလို့ငှါ ပြသထားပေးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
HKAU LA ni e, ya na myen hpyen du ni woi awn ai ,thein sein asuya hpe, shanhte myen shada mung ,nra ai re majaw,ANHTE hku nna,myen laika ka ai shaloi,BAMAR NNGU ai sha myanmar asuya tat ngu ka yang mai na re,ngu hpaji jaw mayu nngai.HPAmajaw nga yang ya ,aten ndai asuya ni hku nna AYU SHADA, MANGHKANG,MAKAM MASHAM MANGHKANG anhtealapran hta wan wut nga ai aten hta AN NAU ni DAT SI ru bang ai hte bung na re ngu mu mada ai.YA yang ,majan gasat ai lam hta shanhte myit ai hku masan nsa taw nga ai majaw,gara hku MANGHKANG shabyin na ngu, ai hpe sha shanhte tam nga aten re.